PTI Myanmar | Leaders in Generator Market
မီးပြတ်ခြင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် ဘယ်လို ဆိုးရွားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေလဲ…
Nov 18, 2020 1:35:49 PM / by PTI Marketing Team
ကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ကိရိယာတွေလို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမရှိဘဲ အကြာကြီး လည်ပတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Network နဲ့ Web-based နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေမှာ မီးအားပြတ်တောက်ခြင်းက လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရတဲ့အထိ ဆိုးရွားတဲ့ သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မီးအားပြတ်တောက်မှုက လုပ်ငန်းတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုချင်း မတူညီ ကြပေမယ့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Bottom Line နဲ့ Productivity ကို ထိခိုက်မှုကတော့ အတူတူပဲ‌ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးစက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိထားသင့်သမျှ ဗဟုသုတပေါင်းချုပ်
Nov 10, 2020 5:58:47 PM / by PTI Myanmar Marketing Team posted in #HighQualityGenerators, #Excellent, #TechnicalServices
မီးစက်တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လေ့လာနေသူတွေအတွက် မီးစက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ အားလုံးကို သိရှိပြီး မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ဖို့၊ မီးစက်ဝယ်ယူပြီးသား လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း မီးစက်တွေအကြောင်း ပိုမို သိရှိပြီး မိမိတို့ရဲ့ မီးစက်ကို ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စေဖို့ ယခုဆောင်းပါးကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။
မီးစက်တွေကို ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေလို ထင်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ယခုဆောင်းပါးကို အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါ မီးစက်တွေဆိုတာ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စက်အစုအဝေး တစ်ခုသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို နားလည် သဘောပေါက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးစက်တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ မပြောခင် မီးစက်တွေကို ဘယ်လို စတင်တီထွင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ သမိုင်းကြောင်းကို အနည်းငယ် တီးခေါက်ကြည့်ရအောင်။
လုပ်ငန်းသုံး မီးစက်တွေကို ဝယ်သင့်၊ မဝယ်သင့် စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်
Nov 4, 2020 2:44:14 PM / by PTI Marketing Team posted in #HighQualityGenerators, #Excellent, #TechnicalServices
မီးအားပြတ်တောက်ခြင်းက လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် များပြားလှတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ယူဆောင်လာလေ့ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးတဲ့ အခြေအနေက အရင်ထက် များစွာ ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးဘဲ မီးအားပြတ်တောက်မှုတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကလည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးဝေမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
လုပ်ငန်းသုံး မီးစက်တွေကို ဝယ်သင့်၊ မဝယ်သင့် တွေဝေ စဉ်းစားနေရတယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းသုံး မီးစက်တွေက သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ကြည့်ရှုပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
မီးစက်တွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ
Oct 20, 2020 8:55:25 AM / by PTI Marketing Team posted in #HighQualityGenerators, #Excellent, #TechnicalServices
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မီးပြတ်တာနဲ့အတူ Service တွေပါ ရပ်သွားတတ်ပြီး ဝင်ငွေ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦတွေမှာတော့ မီးပြတ်တဲ့အခါ Revenue ဆုံးရှုံးရုံသာမက လျှပ်စစ်မီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ နည်းပညာပိုင်းတွေ၊ လုံခြုံရေး၊ Customer ယုံကြည်မှုစတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေပါ နောက်ဆက်တွဲ လိုက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို သင့်တော်တဲ့ မီးစက်တစ်လုံး စနစ်တကျဆင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းသုံး ဒီဇယ်မီးစက်များတွင် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော ပြဿနာများ
Oct 13, 2020 10:34:05 AM / by PTI Marketing Team
လုပ်ငန်းသုံး မီးစက်တွေကို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက ပါဝါလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ အညီ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ Efficient ဖြစ်ဖြစ် အသုံးချနိုင်ဖို့က အတော်လေးအရေးပါပါတယ်။ စက်ရုံမန်နေဂျာတွေ၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ မီးစက်တွေကို Efficient ဖြစ်ဖြစ် အသုံးချနိုင်ပြီး Downtime မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် သတိပြုသင့်တဲ့ မီးစက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အချို့ရှိပါတယ်။
The primary goal ofabusiness isamaximize profits. Therefore the efficiency in converting the business investment into profit is vital.
MAXIMIZE THE BENEFIT OF YOUR INVESTMENT.
To becomeaCorporation on par with those thriving internationally.
In order to achieve our goal, we must meet the international
standards of Business, Management and the Technical Sector.
PTI Company Limited
No 128, Kanaung Minthar Gyi Road
East Dagon, Yangon 11451
Copyright 2020 PTI Myanmar